chii chinonzi USB 3.0 HUB? | Huachuang Electronic
Iyo USB 3.0 yakajairirwa muna 2008 yakavimbisa kuwedzera zvakanyanya huwandu hwe data danho rekuenzanisa ichienzaniswa neiyo tekinoroji yakatangira USB 2.0. Nekuda kwekuti USB 3.0 inoenderana netekinoroji yapfuura, zvishandiso zvekare zvichiri kugona kushandiswa neitsva ye USB 3.0 hub.
Pfupiso yezvakanakira USB 3.0
10x inokurumidza kupfuura USB 2.0
Yepazasi inowirirana ne USB 2.0 mudziyo
Sei USB 3.0 hub ichishandiswa?
Pane zvikonzero zvakawanda nei uchifanira kushandisa USB 3.0 hub. Chimwe chezvikonzero ndechekuti iwe unofanirwa kufunga nezve ramangwana rezvigadzirwa. Nekufamba kwenguva, zvigadzirwa zvinopera izvo zvinongotsigira USB 2.0 standard zvichanyangarika pamusika. Izvi ndizvo zvakanyanya kukosha kana iwe ukafunga kuti chigadzirwa chakatogadzirwa, icho chinonzi USB 3.1 (SuperSpeed ​​+). USB 2.0 saka iri kuderera uye inogona kufuratirwa, sezvo USB 3.0 hub zvakare inogona kubata magoni ekupedzisira ane 2.0 tekinoroji chero. Kana zvishandiso zvitsva zvekupedzisira zvine USB chinotengwa, zvinowanzove zvapihwa ne USB 3.0.
Yazvino USB 3.0 hubs
Kana iwe ukatenga USB 2.0 hub uye uine zvigadzirwa zvekupedzisira zvinotsigira USB 3.0, iwe unogona kuzvishandisa, asi ipapo iwe unofanirwa kuita pasina mukana wekukurumidza we USB 3.0. Izvo hazvigone kuita pfungwa tekinoroji kana mune hupfumi. Kana hub ichizobatanidzwa mune zvivakwa zviripo, kusarudzwa kwe USB 3.0 hub kunokurudzirwa zvikuru.
Kukurumidza sei kuendesa dhata kuburikidza ne USB 3.0 hub?
Iyo yekufambisa chiyero che USB 3.0 hub inoenderana nezvinhu zvakati. Kuti uwane iyo yakanyanya kukurumidza kumhanyisa kwekushandurwa kwedata, zvakakosha kuti zvese zvikamu uye zvishandiso zvinobatanidzwa zvinotsigire iyo USB 3.0 yakajairwa. Semuenzaniso, kuitira kutyaira wekunze hard drive kuti uwane kuita kwakanyanya panguva yekunyora nekuverenga kuverenga, iyo USB port pane mainboard, USB hub uye yeku panze hard drive inofanirwa kuve yakagadzirirwa zvakagadzirirwa USB 3.0. Izvi zvinogona kuoneka kubva kumabhuruu zvinhu mukati me plug uye USB slots.
Chii chinoitika kana ndikabatanidza USB USB mudziyo ne USB 3.0 hub?
Muchokwadi, hapana chingaitika chinokuvadza iyo USB 3.0 hub, yekupedzisira mudziyo kana mainboard. Nekudaro, iwe unofanirwa kurarama nekudonha kwakakosha mukumhanya kana chimwe chezvinhu zvakataurwa hachitsigire USB 3.0.
Iko kune USB 3.0 hub inopa huwandu hwakakosha hwemabasa?
Iko kune chaiyo yakadaro USB 3.0 hub. Shanduro dzakasiyana dziripo. Vamwe vanotsigira WLAN, vamwe vane muverengi wekadhi akabatanidzwa uye nekudaro haingoshande sechinhu chepakati pakubatana pakati pezvishandiso zveUSB, asi zvakare sezvimbo yekudzora pakuverenga makadhi e SD.